Shirkada Diyaaradaha Ee Kenya Airways oo dib u dhigtay duullimaadkii Magaalada Muqdisho | Raadgoob
Shirkada Diyaaradaha Ee Kenya Airways oo dib u dhigtay duullimaadkii Magaalada Muqdisho
Shirkadda duullimaadka ee Kenya Airways ayaa shaaca ka qaadday in dib loo dhigay duullimaad toos ah oo la qorsheeyay inay ku tagto Arbacada maanta ah caasimadda Muqdisho.
Duullimaadka ayuu ahaa inuu billowdo 15-kii bishii November waxaa dib loo dhigay Arbacada maanta,hase ahaatee ma aysan suurta galin,iyadoo loo arkayay billowga duullimaadka tillaabo horumarin karta xiriirka ganacsi ee labadda dal.
Madaxa shirkadda Kenya Airways, Sebastian Mikosz ayaa sheegay in diyaaraddu ay Soomaaliya u soo duuli doonin illaa ogeysiis dambe ayna wajahayaan dib u dhac hor leh uu ku aaddan ‘shuruudo dheeri ah ee shaqadda’.
Diyaarad nooceedu yahay Bombardier Dash 8 Q400 ayaa la qorsheynayeen in loo adeegsado duullimaadyadda Kenya Airways ee isaga kala gooshi lahaa garoonka caalamiga ee Aadan Cadde iyo Jomo Kenyatta, iyadoo qiimaha tikidhka ee halka duullimaad ee Muqdisho iyo Nairobi uu qiimihiisu noqon lahaa 403 doollar.
Balse dib-u-dhigista qorshaha duullimaadyadda ee shirkadda Kenya Airways ayaa ku soo beegantay iyadoo ay dalalka Jabuuti, Burundi iyo Koonfurta Sudan ka gaabsadeen qorshe ay shirkadda Kenya Airways ku doonaysay inay diyaaradaha nooca Bombardier duullimaad ka billaabaan caasimadaha dalalkaasi.
Wasiirka duulista hawadda Soomaaliya,Maxamed Cabdullahi Omar ayaa bishii hore u sheegay idaacadda maxalliga ah ee Kulmiye in diyaarado caalami ah ay soo codsadeen in ay Soomaaliya ka shaqo billaabaan, kuwaas oo ay ugu soo horreeyso Kenya Airways iyo kuwo kale oo ay ka mid tahay Qatar Airways.